🥇 kaonty momba ny mpitsabo nify
Azonao atao ny mandefa ny fanontanianao rehetra amin'ny: info@usu.kz
Te hividy ilay programa ve ianao?
Manana fanontaniana ianao?
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 478
Rafitra fikirakirana: Windows, Android
Tarika fandaharana: USU software
Zava-kendreny: Automatique automatique
kaonty momba ny mpitsabo nify
Attention! Azonao atao ny misolo tena anay amin'ny firenena na tanànanao!
Azonao atao ny mijery ny famaritana ny franchise anay ao amin'ny katalaogin'ny franchise: franchise
Vonona hisolo tena ny entana na serivisinao koa izahay eto amin'ny firenentsika.
Lahatsary momba ny fitantaran'ny mpitsabo nify
Ity horonan-tsary ity dia azo zahana amin'ny dikanteny amin'ny fiteninao.
Download ny doka demo
Rehefa manomboka ny programa dia azonao atao ny misafidy ilay fiteny.
Sandam-bola: EUR RUB USD
Indray mandeha monja no mandoa. Tsy mandoa isam-bolana!
Programa an'ny mpampiasa tokana
Ora fanampiana ara-teknika maimaimpoana
Ora fanampiny fanampiana ara-teknika
Mandidia kaonty momba ny mpitsabo nify
Vidio ny programa
Ny bokin-kaontin'ny kaontin'ny mpitsabo nify dia azo antsoina hoe karazana antontan-taratasy izay tsy maintsy ananan'ny mpitsabo nify tsirairay mba hifehezana ireo hetsika sy fiasan'ny manam-pahaizana manokana. Ny boky momba ny kaontin'ny mpitsabo nify orthopedic dia mety tsy voafehy tsara, satria ny manam-pahaizana manokana dia mety tsy ho ara-potoana fotsiny, manadino na tsy te-hitarika kaonty isan'andro ny asany, satria tsy izy rehetra no manam-potoana, maniry. Ankoatr'izay dia misy koa ny antony hafa manelingelina. Soa ihany fa misy ny vahaolana amin'ireo olana ireo. Noho io vahaolana io dia afaka fenoina mandeha ho azy ny kaonty isan'andro momba ny asan'ny mpitsabo nify. Ary, miaraka amin'izay, io dia lasa fomba fanao tsy maintsy atao, ary miaraka amin'izay dia tsy mandany fotoana ianao sy ny dokoteranao. Miresaka rafitra iray tsy manam-paharoa izahay izay manome anao ny asan'ny kaontin'ny mpitsabo nify ary mamela anao hanara-maso ny asa ataon'ny manam-pahaizana manokana - ity ilay rindrambaiko fitantanana USU-Soft. Ny fampiharana dia fampitahana elektronika ny boky mirakitra boky, izay ampidiran'ny dokotera amin'ny valin'ny asa. Ireo mpiasa izay manana fahefana dia afaka miditra amin'ny fanovana amin'ny programa fitantanana kaontim-pitsaboana nify ary, noho izany, ny fitantanana ny ora fiasana na ny fanendrena ireo marary dia voarindra ary afaka mifehy ny mpiasa foana ianao amin'ny alàlan'ny programa mahomby amin'ny kaontin'ny mpitsabo nify. Ny hetsika rehetra voarakitra ao amin'ny programa kaontin'ny mpitsabo nify dia voatahiry, raha toa kosa ny mpiasa nanao ny fidirana ao amin'ny rindrambaiko, ary koa ny ora sy ny daty voalaza.
Ny programa momba ny kaontim-pitsaboana nify dia mandeha ho azy; mila miditra amin'ny serivisy fotsiny ianao, ny mpiasa izay hifampiraharaha amin'ny mpanjifa, ny ora sy ny datin'ny fanendrena. Manampy an'izay, raha manondro ny vidin'ny fanjifana ara-materialy ianao rehefa manome serivisy, ny programa momba ny kaonty mpitsabo nify dia mitazona firaketana an-tsoratra ireo fitaovana ary manoratra azy ireo avy hatrany amin'ny trano fitehirizana. Ny rindrambaiko dia manana fahaizana mifandray amin'ny telefaona, izay manome anao haingam-pandeha asa miaraka amin'ny mpanjifa. Ho fanampin'izany, ny rindranasa USU-Soft dia manana ny asany namboarina manokana ao anatin'ny maodelin'ny diagnostika, fitarainana ary antsipirihany hafa izay ampiasaina amin'ny fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifa. Io dia ahafahanao mitondra fifandanjana amin'ny asa amin'ny famenoana ireo rakitra. Ny sarintanin'ny nify, izay misy ao amin'ny rindrambaiko, dia manampy anao amin'ny firaketana ny valin'ny asa sasany. Ho fanampin'izay, asehonao tanteraka ny nify rehetra ary manao famaritana ho an'ireo teknisianina manana sarintany mitovy. Miaraka amin'ny fanampian'ny USU-Soft dia mitahiry boky log ho an'ny mpiasa tsirairay avy ianao, raha afaka mametra ny fahafaha-manova sy mamafa ny rakitra, ary mifehy ny mpiasa amin'izay. Ny rindrambaiko dia rafitra fitantanana kaonty mpitsabo nify vaovao izay manampy anao hanatsara ny fitsaboana nify ary hitondra ny haavon'ny fampandrosoana ho amin'ny avo mbola tsy nisy toa azy ary hanome serivisy kalitao ho an'ny mpanjifanao.
Ny tatitra 'Fisoratana anarana mialoha' dia mampiseho ny angon-drakitra momba ny fotoana firy amin'ny firy ao anaty firaketana. Ity fampahalalana ity dia voarakitra amin'ny alàlan'ny programa momba ny kaontim-pitsaboana nify isan'andro isan'andro amin'ny fotoana iray. Koa satria ny fihenan'ny isan'ny fanendrena dia indraindray mifandray amin'ny vanim-potoana na amin'ny fety sasany ary ny hetsika ao an-tanàna, dia manondro kokoa ny mijery ny santionany mandritra ny fotoana maharitra, ohatra ny tamin'ny taon-dasa (sy ny volana mitovy amin'ilay ankehitriny) ka ny andro ankehitriny. Ao amin'ny latabatra vokatr'izany dia mety ho hitanao ny halaviran'ny fandefasana ny fandaharam-potoana - ny isan'ny fanendrena isaky ny dokotera, ary ao amin'ny fononteny ny isan'ny marary voasoratra anarana amin'ireo fanendrena ireo (fitsidihana voalohany sy miverimberina). Ny tabilao etsy ambany latabatra dia mampiseho ny fiovan'ny toe-javatra iasan'ny asa rehefa mandeha ny fotoana. Ao amin'ny sivana 'Status', azonao atao ny mifantina izay marary tianao - 'Fitsidihana voalohany' na 'Famangiana miverimberina'. Ohatra, manana fampiroboroboana ianao, ary te hahafantatra raha miasa izy ary mahasarika marary vaovao - avy eo apetrakao ny 'Fitsidihana voalohany' (izany hoe ireo marary voalohany dia ireo mbola tsy nahazo fotoana.)
Ny modely firaketana ny marary efa voaomana vonona hanampy anao hampihena be ny fotoana ilaina hamenoana ny rakitsoratra marary. Ho fanampin'izay, ny fananana môdely dia manome antoka fa ny dokotera rehetra dia mameno ny firaketana ireo marary miaraka amin'ny maodely mitovy amin'izany. Mba hahamora kokoa ny famenoana ny firaketana ireo marary any ivelany, ny programa momba ny kaontim-pitsaboana nify dia manamboatra ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny 'Diagnosis' sy ny modely hafa. Mifanaraka amin'ny famaritana voafantina, ny programa fitantanana kaontenera mpitsabo nify dia manivana ny 'Fitarainana', 'Anamnesis', sns. Azonao atao ny manitsy ireo fifandraisan-davitra ireo. Rehefa tonga voalohany amin'ny tobin'ny mpitsabo nify ny marary iray, ny fampahalalana momba ny toe-pahasalaman'ny marary (fitarainana, diagnostika, aretin-nify sy am-bava) dia azo ampidirina ao anatin'ny fandaharan'ny kaontin'ny mpitsabo nify. Mba hanaovana izany dia mila mamorona antontan-taratasy fanadinana voalohany ianao. Ny fanomezana torolàlana ho an'ny marary momba ny vidin'ny fitsaboana dia fomba iray hampifanarahana ny marary amin'ny fiovaovan'ny vidin'ny fitsaboana maharitra sy / na fitsaboana lafo vidy. Izy io dia ahafahan'ny dokotera manao tolo-kevitra momba ny safidy fitsaboana, manohana azy ireo amin'ny kajy. Manampy anao hanome serivisy kalitao sy hamafazana ny marary tsirairay amin'ny malama ny asa anatiny ao amin'ny tobin'ny mpitsabo nify. Ankoatr'izay, ny fijerena ny antsipiriany dia azo antoka fa hahazo ny fahatokisan'ny marary anao ary vokatr'izany dia azo antoka fa hanaja ny laza azonao amin'ny programa USU-Soft mandroso amin'ny kaonty sy ny fitantanana ny mpitsabo nify.
Karazan-antso *Vidio ny programaMangataha fampisehoanaMametraka fanontanianaManampy amin'ny endrika-demo
Tsy afaka nandefa ny hafatra. Andramo indray azafady.
Tafita soa aman-tsara ny hafatra! Misaotra anao tamin'ny fangatahanao! Ato ho ato, azonao antoka fa hahazo valiny ianao.
Hiditra amin'ny Internet tsy ho ela isika . Mandritra izany fotoana izany, tsindrio eto raha handefa hafatra aminay amin'ny mailaka izahay
Ho an'ny fikambanana tsirairay
Fanaraha-maso ny ora fiasana
Fandaharana ho an'ny angon-drakitra mpanjifa
Fandaharam-bola momba ny kaonty
Varotra sy trano fanatobiana entana
Fandaharana ho an'ny fivarotana
Fandaharana ho an'ny fivarotana voninkazo
Rafitra fivarotana komisiona
Fandaharana ho an'ny trano fanatobiana entana
Ny kaonty amin'ny famatsiana
Famokarana sy vokatra
Program ho an'ny famokarana
Fandaharana ho an'ny fambolena
fitantanam-bola amin'ny toeram-piompiana
Fandaharana ho an'ny fifanakalozam-bola
Fandaharana ho an'ny pawnshop
Fandaharam-pianarana ho an'ny fikambanana microcredit
Rindrambaiko ho an'ny marketing amin'ny tamba-jotra
Fandaharana ho an'ny toeram-pitsaboana
programa ho an'ny mpitsabo nify
Fandaharana ho an'ny farmasia
Fandaharana ho an'ny optika
Program ho an'ny veterinary
Fandaharana ho an'ny laboratoara
Fandaharana ho an'ny salon mahafinaritra
Fandaharana ho an'ny salon fikarakarana
Program ho an'ny atelier
Fanatanjahan-tena sy fialamboly
Fandaharana ho an'ny fanatanjahantena
Fandaharam-pianarana ho an'ny sekoly dihy
Fandaharana ho an'ny ivon-toerana fialamboly
Fandaharana ho an'ny cafe anti-cafe
Fandaharana ho an'ny fifehezana ny klioba
Fandaharana ho an'ny sauna
Fiara sy fandefasana
Programme ho an'ny serivisy fiara
Fandaharana ho an'ny lozisialy
Serivisy ho an'ny olona
Fandaharana ho an'ny fampitaovana
Fandaharana ho an'ny mpianatra
Fandaharana fivarotana tapakila
Rindrambaiko ho an'ny masoivoho mpandika teny
Fandaharana ho an'ny fanadiovana maina
Fandaharana ho an'ny trano fanontana
Fandaharam-potoana ho an'ny maso ivoho dokam-barotra
Fandaharam-potoana ho an'ny ivon-toerana fanompoana
Fandaharana ho an'ny orinasa fiarovana tsy miankina
Manana fandaharana zato mahery izahay. Tsy ny fandaharana rehetra no adika. Eto ianao afaka mahita ny lisitr'ireo rindrambaiko feno
Ny nify sy ny nify
Kaonty ao amin'ny mpitsabo nify
kaonty fitantanan'ny dokotera
kaonty momba ny tobim-pitsaboana nify
kaonty amin'ny birao nify
Kaonty ny marary any amin'ny mpitsabo nify
kaonty momba ny asan'ny mpitsabo nify
fampiharana ho an'ny mpitsabo nify
programa informatika ho an'ny mpitsabo nify
fifehezana ao amin'ny klinika nify
fifehezana ny mpitsabo nify
rafitra klinika nify
programa fanaraha-maso birao
fitantanana polyclinic nify
programa momba ny serivisy
fitantanana mpitsabo nify
fandaharana mpitsabo nify
fisoratana anarana elektronika ho an'ny mpitsabo nify
fisoratana anarana ho an'ny mpitsabo nify sy hitandrina ny tantaram-pitsaboana
fifehezana anatiny ao amin'ny mpitsabo nify
mitazona ny tantara ara-pitsaboana amin'ny mpitsabo nify
kaonty amin'ny dokotera
karatra fitsaboana ho an'ny mpitsabo nify
ny fifehezana ny famokarana amin'ny dokotera
Fandaharana ho an'ny fanamafisana nify mpitsabo nify
fandaharana ho an'ny foibe ivotoerana
Fandaharana ho an'ny toeram-pitsaboana amin'ny mpitsabo nify
programa ho an'ny fifehezana nify
Fandaharana ho an'ny birao nify
fandaharana ho an'ny mpitsabo nify
fandaharana ho an'ny nify
fandaharana ho an'ny fitsaboana nify
programa ho an'ny kaonty ao amin'ny mpitsabo nify
fifehezana kalitao amin'ny mpitsabo nify
Sarin'ny kaontin'ny mpitsabo nify
Software ho an'ny mpitsabo nify
rafitra ho an'ny fitsaboana nify
Mametraha rindrambaiko vaovao